दाम्पत्य जीवन सन्तुलन राख्न आनीबानी बुझ्न जरुरी – erupse.com
आफ्ना श्रीमतीबाट के चाहन्छन् पुरुष ?
आफ्ना श्रीमान कस्ता छन् ? के कुरामा रुचि राख्छन् ? आफ्नो व्यवहारलाई उनले कसरी लिएका छन् ? आफूले के गरेको मन पराउँदैनन् ? थाहा भएको उत्तम हो । हुन त यस किसिमको जानकारी दोहोरो नै हुनुपर्छ । श्रीमती के चाहन्छिन्, के रुचाउँछिन्, कस्तो व्यवहार मन पर्दैन ? श्रीमानलाई पनि थाहा हुनुपर्छ ।
घर व्यवहार कसरी चुस्त बनाउने ? भान्सालाई कसरी पोषिलो बनाउने ? परिवारका सदस्यहरुलाई कसरी सन्तुष्ट तुल्याउने ? घरलाई कसरी सफा सुग्घर बनाउने भन्ने कुरामा श्रीमतीले नै खास भूमिका निर्वाह गरेको हेर्न रुचाउँछन् पुरुष। भलै, यावत काममा उनले अरु सदस्यबाट पनि सहयोग लिन सक्छिन् ।
कतिपय सामग्रीहरु पुन: प्रयोग गर्न सकिने हुन्छन् । लुगा सिलाएर लगाउन सकिन्छ। नष्ट हुन लागेको सागलाई गुन्द्रुक बनाउन सकिन्छ, थोत्रो प्लाष्टिकमा माटो भरेर केही रोप्न सकिन्छ । यसरी हरेक कुरालाई सदुपयोग गर्ने खुबी होस् भन्ने चाहन्छन् ।